Taliyaha booliska magaalada Garissa Joshua Chepchieng ayaa sheegay in ku dhawaad 20 dagaalyahan oo la rumeysan yahay inay kasoo gudbeen xadka Soomaaliya ay isku dayeen inay weeraraan saldhiga booliska ee degaanka Camey, balse laga hortagey.
Chepchieng ayaa intaasi ku daray in ciidamada ay ku jireen feejignaan, islamarkaana ay fashiliyeen weerarka gaadmada oo dhacay waaberigii hore, ee shalay oo Talaado ahayd.
“Waxaan helnay xog ku saabsan inay Al-Shabaab qorsheynayso weerar ka dhan ah saldhiga booliska iyo goobo kale oo ku yaalla xuduuda, kadibna aan u diyaar garownay,” ayuu yiri Joshua Chepchieng.
Taliyaha oo la hadlayay warbaahinta Kenya, ayaa beeniyay warar sheegaya in qaar kamid ah saraakisha booliska ay ku dhaawacmeen dagaal dhexmaray Ciidamada iyo Al Shabaab.
Wuxuu tilmaamay in dhamaan Askarta la tira-koobey weerarka kadibna, islamarkaana aysan jirin Saraakiil la la’yahay ama wax-yeello kasoo gaartey weerarka degaanka Camey.
“Waxaan rabaa inaan sheego in aysan jirin wax hub ah ama gaari oo dagaalyahanada Al-Shabaab ka qaateen saldhigga markii uu weerarka dhacay,” ayuu hadalkiisa raaciyay Chepchieng.
Mas’uul kale oo katirsan dowladda Kenya ayaa xaqiijiyay in xoogaga Al-Shabaab ay burburiyeen xarun shirkadda Isgaarsiinta Safaricom ay ku leedahay degaanka Camey.
Kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan jarta adeegga Isgaarsiinta xilliga ay weerar ku qaadeyso degaan kamid ah gobolka waqooyi bari, kaasoo amni darro hareysay wixii ka dambeeyay markii ay Ciidamada Kenya soo galeen Soomaaliya 2011.